Suuriya - ALinks
Maqaallada ku saabsan Suuriya
April 30, 2020 Karuna Chandna shaqo, Suuriya
Siiriya waxay ku taal Bariga Dhexe. Waxay udhaxeeysaa Lubnaan iyo Turkiga. Taasi waxay xad la leedahay Badda Mediterranean. Qaranka ayaa leh 605 km xadka Ciraaq. 76 KM xadka Israa’iil. 375 Km xadka Urdun. 375 km of
Ma waxaad dooneysaa inaad ogaato shuruudaha Visa Suuriya? Hubi Halkan!
April 14, 2020 Karuna Chandna Suuriya, safarka, fiisada
Fiiso lagu tago Syria way adag tahay in la helo. Dad badan oo soo gudbiya araajida oo ama diida ama sugaya ogolaansho. Tan iyo markii dhibaatadu xasilisay oo ay dhammaystirtay burburka Daesh, Suuriya waxay mar kale u furan tahay ganacsi waxayna diyaar u tahay inay qaabisho dalxiisayaasha. Hoos